I-10 Blogs Yezobuchwepheshe Ongazi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 25, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Amabhulogi Ezobuchwepheshe abalulekile uku Martech Zone. Lapho ngibhala ukuthi ubuchwepheshe obuthile bukuthinta kanjani ukumaketha, kuvame ukukhuthazwa yibhulogi yezobuchwepheshe. Imvamisa benza umsebenzi omuhle wokuhlanganisa izindaba nemibono ngobuchwepheshe, kepha baphuthelwe yizinhlelo zokumaketha ezisebenzayo zazo.
Abafana abakhulu bahlala bezama ukuthola izindaba ezinkulu kakhulu, inhlebo yakamuva, noma ukuzama ukuphonsa isihloko esikhulu seposi esidonsa ukunaka kwawo wonke umuntu. Kuningi kakhulu okwenzekayo kwezobuchwepheshe okufanele ukwazi ngakho, noma kunjalo. Laba bantu bahlala njalo phezu kwakho!
Nayi i-10 Blogs Yezobuchwepheshe Obungazi Ngayo:
Yini uNoo - UPatric ungumngani omuhle futhi inkampani yakhe ifundisa 'okungebona abefundisi'.
Ukubhala ngekhodi ukushaqeka - UJeff unezeluleko eziyigugu futhi ukubhala kwakhe kuhlala kuhlekisa.
UKen McGuire - UKen uhlanganisa ukuthi ubuchwepheshe buyishintsha kanjani impilo yethu yansuku zonke.
Kepha Uyintombazane - kunesikhala samazwi abesifazane esikhaleni seTech. U-Adria uyayigcwalisa.
I-StarterTech - Le bhulogi yenza ubuchwepheshe bufundeke kalula.
I-Blog Yomthetho Wezobuchwepheshe Nokumaketha - U-Eric uhlanganisa wonke amacala asenkantolo athinta ochwepheshe nabathengisi ngokufanayo.
Ama-Quips we-Chip - Umngani wesikhathi eside Martech Zone, I-Chip ihlale iqopha ezinye zezindaba ezimnandi kunetha.
Izigwebo ezi-2 noma eziNcane - Ngisho zimfushane kunezikhala ze-Chip, umngani uBill Dawson uqhubeka phambili kwezobuchwepheshe futhi unikeza izincazelo ezithile.
Amantongomane enzuzo - omunye umngane webhulogi, uThor Schrock uhlanganisa ubuchwepheshe nenzuzo kubhulogi yakhe.
Yonke iBlog Blog kaJoe - umngani omuhle uJason Bean uvamile kubhulogi le-Every Joe.
Kwesinye isikhathi amabhulogi awanakho ukubukeka nokuzizwa okuphucuziwe - kepha okuqukethwe kuhlala kukhona! Ngeza lawa mabhulogi kusifundi sakho sokuphakelayo futhi nginethemba lokuthi ngeke udumazeke.
Tags: ukugcinwa kwamakhasimendeidatha yezenhlalo
Ingabe i-ChaCha ihlakaniphile kune-Google?
Hawu, ngiyabonga, Doug! Ngiyajabula ukuthi ngifakwe ohlwini olunjalo lokuhlonishwa - ikakhulukazi ngokuthandwa nguJeff Atwood.